कहाँबाट आयो भ्या,नभित्र भे,टिएको २८ वटा मानव ख,प्पर र १० वटा हातखु,ट्टाको ह,ड्डी ? – Dainik Sangalo
कहाँबाट आयो भ्या,नभित्र भे,टिएको २८ वटा मानव ख,प्पर र १० वटा हातखु,ट्टाको ह,ड्डी ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन २०, २०७८ समय: १२:१३:०३
मोरङ — भ्यानमा राखिएको अवस्थामा २८ वटा मानव खप्पर र १० वटा हातखु,ट्टाको ह,ड्डी बरामद भएको छ। सशस्त्र प्रहरीले विराटनगर–१५ रानीस्थित २ नम्बर ढाटनजिकबाट सो संख्यामा ख,प्पर र ह,ड्डी बरामद गरेको हो।
प्रहरी टोलीले मंगलबार रानीस्थित ढाटनजिक को२च ९६४८ नम्बरको भ्यान बेवारिस अवस्थामा देखेको र शंका लागेर जाँच मानव ख,प्पर र ह,ड्डी फेला परेको हो।
प्रहरीका अनुसार उक्त ह,ड्डी मानव ख,प्पर र हातखुट्टाको ह,ड्डी भएको पुष्टि भएको छ। उक्त ख,प्पर र हड्डी कहाँबाट कसरी आयो भनेर अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।
थप कारबाहीका लागि ती खप्पर, हड्डी र भ्यान इलाका प्रहरी रानीमा बुझाइएको सशस्त्रले जनाएको छ
Last Updated on: October 6th, 2021 at 12:13 pm